Jabhadda TPLF oo soo bandhigtay aqoonsiyada saraakiil ay ka dishay meleteriga Itoobiya.
0 Wednesday March 03, 2021 - 06:31:30
Kooxda TPLF ee ka dagaallanata wadanka Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay khasaare lixaad leh gaarsiisay ciidamada melleteriga federaaliga xabashida ee duullaanka ku qaaday gobolka Tigray.
Diyaarad Ruushku leeyahay oo ku burburtay waqooyiga dalka Suuriya.
0 Sunday February 28, 2021 - 16:31:07
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in diyaarad melleteri oo uu ruushku leeyihay ay kusoo dhacday deegaan dhaca waqooyi bari dalka Suuriya.
Mareykanka oo qalab ciidan soo dhoobtay Jaziirad ku dhow dalka Turkiga.
0 Sunday February 28, 2021 - 16:22:52
Dowladda Mareykanka ayaa boqolaal kamid ah ciidamadeeda melleteriga iyo kuwa badda ku daad guraynaysa gudaha wadanka Gariigga gaar ahaan meel ku dhow xuduudd lagu murunsanyahay.
Mareykanka oo Melleteriga Itoobiya ku eedeeyay in uu xasuuq ka geystay gobolka Tigray.
0 Saturday February 27, 2021 - 11:23:23
Warbixinno ay saacadihii lasoo dhaafay soo saareen hay'ado reergalbeed ah iyo dowlado ayay ku xaqiijiyeen in ciidamada xabashida Itoobiya ay ka xasuuq ka geysteen gobolka Tigray.
0 Wednesday February 24, 2021 - 12:24:35
Dowladda dabadhilifka Masar ayaa muujisay in magaalada Alqudus ay u aqoonsantahay caasimadda Yahuudda sahyuuniyadda kadib markii uu wasiir Masaari ah halkaas booqday islamarkaana uu kula kulmay madaxda Yahuudda.
Dad ka badan Nus Malyuun qof American ah oo Carona udhintay.
0 Tuesday February 23, 2021 - 12:11:29
Tiradada dalka Mareykanka ugu dhintay cudurka Carona Virus ayaa ka gudubtay nus malyuun ruux xilli cudurkaas uu si xowlli ah ugusii faafayo 50-ka gobol ee wadankaasi uu ka koobanyahay.
Safiirkii Talyaaniga ee Koongada Dimuquraadiga ah oo lagu dilay weerar jidgal ah.
0 Monday February 22, 2021 - 18:07:33
Weerar hubaysan oo ka dhacay bariga wadanka Koongada Dimuquraadiga ah ayaa sababay dhimashada diblumaasi Talyaani ah iyo xubno la socday.
Saldhig ciidanka Mareykanku ay ku leeyihiin Ciraaq oo laweeraray.
0 Monday February 22, 2021 - 08:33:27
Maleeshiyaad hubaysan oo loo malaynayo in ay daacad u yihiin dowlada shiicada iiraan ayaa markale weerar sawaariikh loo adeegsaday ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen saraakiil ameerikaan ah.
Mareykanka oo dib ubilaabaya dhaqaalihii uu Itoobiya kusiin jiray ladagaallanka Muslimiinta.
0 Saturday February 20, 2021 - 13:40:25
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay qaadday xayiraad uu maamulkii Donald Trump kusoo rogay dowladda xabashida Itoobiya.
Musiibo Bani'aadanimo oo lagasoo tabiyay Bariga dalka Yemen.
0 Thursday February 18, 2021 - 17:50:16
Wararka ka imaanaya wadanka Yemen ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka bilaawdeen magaalada ugu dambaysa ee ciidamada xukuumadda dabadhilifka Yemen ay uga suganyihiin waqooyiga wadankaasi.
0 Thursday February 18, 2021 - 17:41:05
Markii ugu horraysay ayay dowladda dabadhilifka imaaraatka carabta safiir iyo diblumaasiyiin geysay dhulalka falasdiin ee yahuudda gumeysato iyadoo is rasmi ah maamulka yahuudda ugu aqoonsatay dowlad madax banaan.
Kooxda TPLF oo weeraro culus ka wadda gobolka Tigray.
0 Thursday February 18, 2021 - 17:38:41
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaanno katirsan gobolka Tigray ee dhaca waqooyiga wadankaasi.
Shil ay dad Badan ku dhinteen oo ka dhacay Waddanka Hindiya.
0 Wednesday February 17, 2021 - 07:39:23
Wararka naga soo gaaraya waddanka Hindiya oo dhaca Koonfurta qaaradda Aasiya ayaa waxay sheegayaan in saacadahii lasoo dhaafay halkaas uu ka dhacay shil aad xooggan oo ay ku dhinteen dad badan.
0 Tuesday February 16, 2021 - 11:44:56
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in weerar dhaliyay khasaara dhimasho iyo dhaawac leh lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo American ah.
Melleteriga Itoobiya oo dagaal ku qabsaday deegaanno katirsan dalka Suudaan.
0 Monday February 15, 2021 - 11:42:52
Dagaallo ayaa dib uga qarxay deegaannada xuduudda ah ee udhaxeeya wadamada Suudaan iyo Itoobiya xilli labada dowladood ay isku jeedinayaan eedaymo kulul.
PKK oo askar Turki ah ku dishay waqooyiga Ciraaq.
0 Sunday February 14, 2021 - 17:23:08
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in weerar hubaysan lagu dilay ciidamo katirsanaa xukuumadda dabadhilifka Turkiga ee wadankaas ku sugan.
06/06/2021 - 12:32:25
05/06/2021 - 16:37:50
19/04/2021 - 16:27:45
19/04/2021 - 16:26:36
19/04/2021 - 16:25:30
19/04/2021 - 16:24:08
Dhageyso: Xalqada 4aad warbixinnada Magaalooyin Taariikh Dahabi ah reebay
19/04/2021 - 16:21:48
Magaalooyin Taariikh Dahabi ah reebay Q3aad
18/04/2021 - 16:05:17
Dhageyso: Xalqada 2aad ee Warbixinnada Magaalooyin Taariikh Dahabi ah reebay.
18/04/2021 - 16:03:33
Dhageyso: Xalqada 1aad ee Warbixinnada Magaalooyin Taariikh Dahabi ah reebay.
18/04/2021 - 15:57:42
Qarax Khasaara badan dhaliyay oo ka dhacay degmada Afmadoow.
12/04/2021 - 16:31:20
12/04/2021 - 16:29:00
Daawo Video: Muuqaal qeyb ka ah silsiladda taxanaha ah ee loo yaqaan "Min Thuquuril Ciz".
12/04/2021 - 16:27:45
Al Shabaab oo ku dhawaaqay in berri ladhammeystirayo bisha Shacbaan.
12/04/2021 - 16:26:33
Sideen usoo dhoweynaa Bisha Barakeysan Ee Ramadaan [Dhageyso Q3aad].
08/04/2021 - 17:01:13
Melleteriga Suudaan oo Itoobiya kala wareegay deegaanno hor leh.
08/04/2021 - 16:59:30
Meydadka Carruur si arxan darra ah loo dilay oo Baydhabo lasoo dhigay.
08/04/2021 - 16:57:48
Weerar Khasaara dhaliyay oo ka dhacay deegaanka Buurane.
08/04/2021 - 16:56:09
Madaxweynaha Masar oo ku hanjabay in uu si adag u wajahi doono arrinta biya xireenka Niil.
08/04/2021 - 16:54:51
Daawo: AlKataa'ib oo baahisay Muuqaal qeyb ka ah silsilada taxanaha ah ee loo yaqaan "Min Thuquuril Ciz" .
07/04/2021 - 21:18:16
Qarax gaari looga gubay ciidanka Kenya oo Lamu ka dhacay.
05/04/2021 - 16:09:44